कोरोना संक्रमित बढेकाले लकडाउन थप सशक्त हुनेछ – मुख्यमन्त्री भट्ट भिडभाड गरेर राहत वितरण गर्ने, तस्वीर लिने कार्य रोक्छौं !
सोमबार, चैत २४, २०७६ गोदावरी न्युज
धनगढी – नेपालमा पुष्टि भएका कोभिड–१९ का नौं संक्रमित मध्ये चार सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन् । शनिबार एकसाथ सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका दुई पुरुष र एक महिलामा कोरोना भएको पुष्टि भएपछि रोगको रोकथाम र निगरानीमा चुनौती थपिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमित बढ्दै गइरहेका बेला कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले केकस्ता रणनीति अपनाएको छ, तयारी कस्तो छ भन्ने विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसारको तयारी गरिरहेको छ । यो भनेको क्वारेन्टाइन बनाउने र त्यहाँ मानिसलाई राख्ने, जाँच गर्ने कुरा हुन् । संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । त्यसका साथै हामीले प्रदेशमा उपलब्ध नौ वटै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने तयारी थालेका छौं । हामीले थप १५ वटा भेन्टिलेटर स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं । जनतामा विश्वास कायम रहिरहने गरी हामी काम गरिरहेका छौं ।
कोराना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु सुरक्षाको पहिलो घेरामा हुन्छन, उहाँहरुले प्रयोग गर्ने उपकरण लगायत स्वास्थ्य सामग्री प्रदेशमा पर्याप्त छन् ?
हामीसँग केही दिनका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री छन् तर पर्याप्त छैनन् । यो संकट निश्चित भूगोल र देशमा मात्र निम्तिएको होइन । तसर्थ सचेत हुँदै प्रदेश सरकार लागिरहेको छ । अहिले हामीसँग सामान्य रुपमा आवश्यक पर्ने ह्याण्ड स्यानिटाइजर, पिपिई, सर्जिकल मास्क लगायतका अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्तता धेरै छैन तर हुँदै नभएको पनि हैन ।
जारी लकडाउनको समय लम्बिँदा खाद्यान्न लगायत तरकारी ढुवानीमा समस्या आइरहेको भन्ने जनगुनासो बढेको छ । यसले गर्दा मानिसले पैसा भएर पनि सहज रुपमा खाद्यान्न किन्न पाइरहेका छैनन् । या समस्या समाधानका लागि केकस्तो प्रयासमा हुनुहुन्छ ?
तपाईँले भनेको एउटा कुरामा म असहमति जनाउँछु । मानिसले पैसा भएर पनि नियमित किन्ने ठाउँबाट किन्न नपाएका हुन् तर किन्न नै नपाएका भने होइनन् । खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको ढुवानी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्याप्त रहेको र ढुवानीमा समस्या नभएको स्पष्ट पार्छु । अर्को कुरो, यस संवेदनशील अवस्थामा औषधि, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायत अति आवश्यक सामग्री खरीदको नाममा भिडभाड गर्ने र लकडाउनको पालना नगर्नेलाई भने कारवाही गरिनेछ ।
यदि कसैले महामारीको बेला कालोबजारी गरेको पाइए प्रचलित कानूनखअनुसार हदैसम्मको कारवाही हामी गर्नेछौं । यसका लागि हामीले अनुगमन टिम पनि बनाएका छौं । अनुगमनका क्रममा कालोबजारी गरेको पाइएमा वा उपभोक्ताको गुनासो आए हामी सम्बन्धितलाई कारवाही गर्नेछ ।
हेर्नुस, मानिसहरु सामान्य समय जस्तै जसरी राहत वितरण गर्ने तस्वीर लिने अनि प्रचार गर्ने काममा लागेका छन् । यसो गर्दा जोखिम बढ्ने सम्भावना निकै बढी हुन्छ । त्यसैले हामीले आइतबारदेखि अव्यवस्थित रुपमा विभिन्न नाममा वितरण गरिँदै आएका राहत वितरणमा रोक लगाएका छौं । मानिसहरुले संवेदनशीलतालाई बुझिदिनुपर्यो । यदि कसैलाई सहयोग गर्ने इच्छा चाहना भए देशमा तीन तहका सरकार छन् । कुनै पनि सरकारसँग समन्वय गरेर वितरण गर्न सकिने छ । हैन भने कुनै सामाजिक दूरी कायम नगरी भीडभाड गरेर राहत वितरण गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तो हैन । हामीले धनगढीमा खासगरी दुवईबाट आएका व्यक्तिलाई संक्रमण देखिसकेपछि उहाँहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई ट्रयाकिङ गरेका छौँ । हामी यस विषयमा गम्भीर नै छौं । हामीले तेस्रो मुलुक मात्र हैन भारतबाट आएकालाई समेत ट्रयाकिङ गरेका छौँ । सरकारले केही गरेन, सरकार हरायो भन्नु भनेको विरोधका लागि विरोध मात्र हो । विरोध गर्नेहरु गरिहन्छन, हामी आफ्नो काममा लागिरहन्छौं ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २४, २०७६, १५:४८:००